Hugues Rajaonson “Ndao hanjifa ny vita eto an-toerana isika”
4537,8 euros ny sandan’ny ariary omaly, ka isan’ny anton’io ny fanafarantsika entana avy any ivelany, toy ny vary zarain’ny fanjakana, raha ny fanehoan-kevitry ny mpahaiary Hugues Rajaonson.
« Miarina by Fihariana » 10.970.300.000 Ariary ny vola navoaka
Sivy herinandro eo izao no nametrahan’ny Filohan’ny Repoblika Andry Rajoelina ny tolotra «Miarina by Fihariana » , izay miendrika fampindramam-bola amin’ny tahan-janabola 8%.
Tetibolam-panjakana 2021 4,1% no heverina ho fitombon’ny harin-karena
Taona hiatrehana ny fanarenana ara-toekarena sy fanatrarana ny tanjona hampandrosoana ny firenena ny taona 2021, hoy ny mpitondra. Nampahafantarina omaly 12 aogositra nandritra ny filankevitry ny minisitra ny drafitra hoenti-mametraka ny volavolan-tetibola taona 2021 natao hanarenina ny vokatry ny coronavirus.
Fizahantany Mangataka ny hanokafana ny any Isalo ny mpandraharaha
Toerana manana ny lazany amin’ny fizahantany eto Madagasikara i Isalo, ao amin’ny Kaominina Ranohira, Faritra Ihorombe. Toerana faharoa mahasarika mpizahatany betsaka aorian’i Nosy-Be izy.
Anisan’ny nahazo tombony tamin’izany ireo fikambanan’ny vehivavy any ambanivohitra misehatra momba ny fambolena sy ny fiadiana amin’ny fiovaovan’ny toetr’andro. Tanjona amin’izao fampiofanana izao mantsy ny hampiroboroboana ny fahaiza-manaon’ny vehivavy any amin’ny tontolo ambanivohitra. Tena ilaina ny fiofanana ary mangetaheta izany na ireo mpisehatra maro voakasika momba ny ala sy ny tontolo iainana avy any ivelany sy ny eto an-toerana na ireo orinasa madinika sy salantsalany manao fandraharahana amin’ny fambolena. Ny hahatonga ny vehivavy sy ny tantsaha any ambanivohitra hahaleotena ary afaka hanana traikefa amin’ny fandraharahana mba hampitombo ny faripiainana sy ny harinkarena eny ifotony no tanjon’ity atrikasa sahanin’ny FAO ity. Nivoitra ihany koa fa tsy ireo mpanangom-bokatra foana no tokony hanana ny tombony any ambanivohitra fa ireo tantsaha miasa sy mihosona amin’ny famokarana ataony no tena tokony hanankarena. Voaresaka tao ihany koa ny mahakasika ny ady tsy maintsy atao amin’ny fiovaovan’ny toetr’andro noho ny famotehana ny tontolo iainana tahaka ny doro tanety mbola misy eto Madagasikara. Efa miantraika amin’ny fiainana andavanandro sy ny sakafo hohanina ary ny fahasalamana sy ny asam-pambolena mihitsy izany ka mila asiana ny fampiofanana matetika sahala amin’itony, hoy ny teo anivon’ny FAO.